एमाले सिद्धार्थनगरको चुनावी अभियान तीव्र
रबिन्द्र प्रताप गुप्ता, भैरहवा, ३ जेष्ठ । नेकपा एमाले सिद्धार्थनगरले चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । आगामी जेठ ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन घरदैलो अभियान थालेको एमालेले जनाएको छ ।
एमाले सिद्धार्थनगर निर्वाचन परिचालन तथा प्रचार प्रसार समितिले मंगलबारदेखि सिद्धार्थनगर १ बाट सुरु गरेको घरदैलो अभियान बुधबार सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. २ र १२ मा घरदैलो गरिएको प्रदेश कमिटीका निर्वाचन परिचालन समिति सदस्य भरतकुमार पोखरेलले जानकारी दिए ।
मेयरका उम्मेदवार हरि प्रसाद अधिकारी, उपमेयरका उम्मेदवार उमा काफ्ले र वडा नं. २ का अध्यक्षका उम्मेदवार दीपक थापा, वडा नं. १२ का अध्यक्षका उम्मेदवार घनेन्द्र विक्रम पाण्डे एवं सदस्यहरुको टोली र सिनपा ८ का अध्यक्षका उम्मेदवार राजेन्द्रप्रसाद पन्थी सहितको टोलीले घैरदैलो अभियान गरेको हो । अभियानका एमाले समर्थित सयौं कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थिायो ।
घरदैलो अभियानका क्रममा एमालेप्रति जनताको साथ र समर्थन उल्लासपूर्ण रहेको एमालेले जनाएको छ ।अभियान अन्तर्गत बिहीबार सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको वडा नं. ३ मा घरदैलो अभियान संचालन गर्ने एमाले निर्वाचन परिचालन कमिटीका संयोजक जीवलाल अर्यालले जानकारी दिए ।